ဦးလထော်ဘရန်ရှောင် ဆေးကုသခွင့် ပယ်ချခံရ
ကြာသပတေး, ၂၃ မေ ၂၀၁၃	Mizzima Burmese
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ဦးလထော်ဘရန်ရှောင် ဆေးကုသခွင့် ပယ်ချခံရ
ဦးလထော်ဘရန်ရှောင် ဆေးကုသခွင့် ပယ်ချခံရ	ဖနိဒါ	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၂၄ မိနစ်	ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ဖမ်းဆီးခံထားရသော ဦးလထော် ဘရန်ရှောင်သည် ဆေးကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်နေကြောင်း သူ၏ ရှေ့နေ ဦးမာခါးက ပြောသည်။ တဆက်ထဲမှာပင် ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် (စရဖ)များက နှိပ်စက်မှုပြုခဲ့သည်ဟုလည်း သူက စွပ်စွဲလိုက်သည်။မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံနေရသော ကချင်အမျိုးသား ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်၏ အမှုကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က မြစ်ကြီးနားတရားရုံးတွင် ပထမဆုံးကြားနာရာတွင် စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် ဆရာဝန်နှင့် ကုသခွင့်ပေး ရန်၊ နှိပ်စက်ခံထားရသည်ဆိုသော ဒဏ်ရာများကို တရားရုံးတွင် မှတ်တမ်းတင်ပေးရန်နှင့် တရားခံဘက်မှလည်း ဒဏ်ရာများကို မှတ်တမ်းတင်ခွင့် ပြုရန် တရားခံရှေ့နေဘက်က တောင်းခံခဲ့သည်။တရားသူကြီး ဦးမြင့်ထူးက ဦးဘရန်ရှောင်၏ ဒဏ်ရာများကို တရားရုံးတွင် မှတ်တမ်းတင်ရန် ဆိုသည့်အချက်ကိုသာ လက်ခံခဲ့သည်။ “(လထော်) ဘရန်ရှောင်ကို ဆေးပါရဂူ ဆရာဝန်တဦးနဲ့ ဆေးကုသပေးဖို့ တောင်းတာ မပေးဘူး။ တရားရုံးကနေ မပေးနိုင်ဘူး။ ထောင်မှာဘဲ သွားပြောလိုက်ပါလို့ ပြောတယ်” ဟု ရှေ့နေ ဦးမာခါးက ပြောသည်။ တရားရုံးထုတ်ရာတွင် ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်ကို လက်ထိတ်ခတ် ခေါ်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ဇနီးသည်ဖြစ်သူ ဒေါ်ဇယ်ညွှန့်က “လူတိုင်းကို ကြောက်သလိုလို ဖြစ်သွားပြီ။ သူ့ကို ကြည့်ရတာ ဦးနှောက် နည်းနည်း လိုသွားပြီ ထင်တယ်။ … တရားရုံးမှာ ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း သူ့ဖာသာသူ ရီရီနေတယ်။ နောက်ပြီး အစာစားလို့ လည်းမရဘူး၊ အစာစားရင် လည်ချောင်းမှာ တအားနာတယ်လို့ ပြောပြတယ်”ဟု ပြောသည်။သူက ဆက်လက်ပြီး “ပါးနှစ်ဖက်မှာ သံကို မီးဖုတ်ပြီး တို့ ပေးတယ်ထင်တယ်။ အဲဒီအမာရွတ်က နှစ်ဖက်စလုံး နီနေသေးတယ်။ ပေါင်နှစ်ဖက် စလုံးမှာလည်း ဓါးမြောင်နဲ့ ထိုးပြီးမှ မွှေထားတဲ့ ဒဏ်ရာလည်း တွေ့ရတယ်။” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။ ယနေ့ တရားခွင် တရားလိုပြသက်သေ ဒုစရိုက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ်အောင်မြသန်းအား စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့သည်။၎င်းတရားလို သက်သေက ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထိ ကချင်လွှတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဘက်မှ တပ်ကြပ်ကြီးအဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး စစ်သင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံထိ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ သွားရောက် သယ်ယူခဲ့သည်ဟု ထွက်ဆိုသွားခဲ့သည်။ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့ ထောင်ကြီးတွင် ချုပ်နှောင်ထားပြီး လာမည့် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ရုံးချိန်း ထပ်ပေးလိုက်သည်။ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့က ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်ကို အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် ကျော်မျိုးနိုင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက် စရဖ လက်ထဲ လွဲပြောင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကချင်လွှတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မ ၁၇ (၁) နှင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည်။ယခုလ ၆ ရက်နေ့က ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်အား ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရန့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် လူပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်က မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်စုဝေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
GSP အတိအကျ မသိရ၍ ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင် ဖြစ်ရ
ဒေါ်လာအတက် မီးအပျက်ကြောင့် ဆန်ဈေးကွက် မာလာ
လေးနိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်မည်ဟု အိန္ဒိယ-တရုတ် ဆွေးနွေး
ABSDF နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးမှု နှစ်ဘက်စလုံး အားရကျေနပ်မှုရှိ
ဒေသန္တရအမိန့်မှာ လူ့အခွင့်အရေး မချိုးဖောက်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဆို
ပင်လုံ ကတိကဝတ်များ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ကချင်အတိုင်ပင်ခံ သဘောထားရှိ	အစိုးရနှင့် KIO ဆွေးနွေးပွဲ ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်မည်	KIO နှင့်တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံတကာ လေ့လာသူများ မဖိတ်ခေါ်နိုင်	မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ဒုဗိုလ် တဦး ပြန်လွတ်လာ	အစိုးရနှင့် KIO မေလ မကုန်မီ တွေ့ဆုံဖွယ်ရှိ၊ လေ့လာသူများကိစ္စ ညှိနှိုင်းနေရဆဲ	ဦးဘရန်ရှောင်၏ ဖြောင့်ချက်ယူသူအား စစ်ဆေးရန် တင်ပြချက် ထပ်မံ ပယ်ချခံရ	KIO နှင့် အစိုးရ ပြန်တွေ့နိုင်ရန် ညှိနေကြဆဲ	Who is Online
We have 76 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved